ဘုရင့်နောင် အမှတ်-၂ မြစ်ကူးတံတား လာမည့် ဧပြီလတွင် ဖွင့်လှ... | CarsDB
ဘုရင့်နောင် အမှတ်-၂ မြစ်ကူးတံတား လာမည့်...
ဘုရင့်နောင် အမှတ်-၂ မြစ်ကူးတံတား လာမည့် ဧပြီလတွင် ဖွင့်လှစ် အသုံးပြုမည်
ဘုရင့်နောင် အမှတ်-၂ မြစ်ကူးတံတား တည်ဆောက်မှုမှာ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပြီးစီးလျက်ရှိပြီး ယခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် ဖွင့်လှစ် အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီမှ သတင်းရရှိသည်။
[caption id=attachment_387568 align=alignnone width=500] A rescue boat works nearadamage bridge in Kyauk Myaung township, east of Shwe Bo, Sagaing division in central Myanmar, followinga6.8-magnitude quake which hit some 116 kilometers (72 miles ) north of the northern Myanmar city on November 11, 2012. A powerful earthquake that struck Myanmar on November 11 left at least two dead and five missing,agovernment official said, after the tremor sparked panic in Mandalay. AFP PHOTO/ Soe Than WIN[/caption]
အမှတ်-၂ မြစ်ကူးတံတားကို ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အထူးစီမံကိန်းကြီးအဖွဲ့-၅ မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီ ၆ ရက်တွင် စတင် ဆောက်လုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် ဖွင့်လှစ်အသုံးပြုနိုင်ရန် လျာထားကြောင်း၊ တံတားတည်ဆောက်မှု လုပ်ငန်းများမှာ ရှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပြီးစီးလျက်ရှိကာ လက်ရှိတွင် တံတားသံဘောင် တပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဘုရင့်နောင် အမှတ်-၂ မြစ် ကူးတံတား တည်ဆောက်မှုကြောင့် ဘုရင့်နောင် အပေါ်လွှာတံတားပေါ်တွင် ကားကျပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ နှစ်ထပ်ခုံးကျော်တံတား ဖွင့်လိုက်ပြီ ဆိုပေမဲ့ လှိုင်သာယာဘက်ကို သွားတဲ့ကားက များနေတော့ တံတားပေါ်မှာ နည်းနည်း ကျပ်နေတယ်၊ လှိုင်သာယာဘက်သွားတဲ့ ကားက အရင်နှစ်ထက် ခုနစ်ဆ၊ ရှစ်ဆလောက် များလာတယ်၊ မြစ်ကူးတံတားပြီးရင်တော့ တော်တော် အဆင်ပြေမှာပါ၊ လက်ရှိ ကျပ်နေတာက သီရိမွန်နဲ့ ဘုရင့်နောင်လမ်းကြားမှာပါ၊ လမ်းခင်းနေ တာကြောင့်လည်း ပါပါတယ်ဟု ဘုရင့်နောင် အဝေးပြေးကုန်စည်ဒိုင်အသင်း ဥက္ကဋ္ဌဦးခင်ဟန်က ၎င်း၏ အမြင်ကို ပြောပြသည်။ ရန်ကုန်မြို့၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ဘုရင့်နောင်ဘက်ကမ်းနှင့် လှိုင်သာယာဘက်ကမ်းကို ချိတ်ဆက်ပေးမည့် ဘုရင့်နောင် အမှတ်-၂ မြစ်ကူးတံတားကြီးမှာ ယာဉ်သွားလမ်း လေးလမ်းပါရှိပြီး ပင်မ တံတား အရှည်မှာ ၁ç၆၂၈ ဒသမ ၃ ပေနှင့် ခံနိုင်ဝန်အလေးချိန် ၇၅ တန် သတ်မှတ်ထားကြောင်း၊ ရေလမ်း ကင်းလွတ်ခွင့် အမြင့်ပေ ၃၆ ပေရှိကာ အဆိုပါတံတားကို ငွေကျပ်သုံးဆယ် ဘီလျံခန့် အကုန်အကျခံ တည်ဆောက်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဘုရငျ့နောငျ အမှတျ-၂ မွဈ ကူးတံတား တညျဆောကျမှုကွောငျ့ ဘုရငျ့နောငျ အပျေါလှာတံတားပျေါတှငျ ကားကပျြမှုနှငျ့ ပတျသကျ၍ နှဈထပျခုံးကြျောတံတား ဖှငျ့လိုကျပွီ ဆိုပမေဲ့ လှိုငျသာယာဘကျကို သှားတဲ့ကားက မြားနတေော့ တံတားပျေါမှာ နညျးနညျး ကပျြနတေယျ၊ လှိုငျသာယာဘကျသှားတဲ့ ကားက အရငျနှဈထကျ ခုနဈဆ၊ ရှဈဆလောကျ မြားလာတယျ၊ မွဈကူးတံတားပွီးရငျတော့ တျောတျော အဆငျပွမှောပါ၊ လကျရှိ ကပျြနတောက သီရိမှနျနဲ့ ဘုရငျ့နောငျလမျးကွားမှာပါ၊ လမျးခငျးနေ တာကွောငျ့လညျး ပါပါတယျဟု ဘုရငျ့နောငျ အဝေးပွေးကုနျစညျဒိုငျအသငျး ဥက်ကဌဦးခငျဟနျက ၎င်းငျး၏ အမွငျကို ပွောပွသညျ။ ရနျကုနျမွို့၊ မရမျးကုနျးမွို့နယျ၊ ဘုရငျ့နောငျဘကျကမျးနှငျ့ လှိုငျသာယာဘကျကမျးကို ခြိတျဆကျပေးမညျ့ ဘုရငျ့နောငျ အမှတျ-၂ မွဈကူးတံတားကွီးမှာ ယာဉျသှားလမျး လေးလမျးပါရှိပွီး ပငျမ တံတား အရှညျမှာ ၁ç၆၂၈ ဒသမ ၃ ပနှေငျ့ ခံနိုငျဝနျအလေးခြိနျ ၇၅ တနျ သတျမှတျထားကွောငျး၊ ရလေမျး ကငျးလှတျခှငျ့ အမွငျ့ပေ ၃၆ ပရှေိကာ အဆိုပါတံတားကို ငှကေပျြသုံးဆယျ ဘီလြံခနျ့ အကုနျအကခြံ တညျဆောကျမညျ ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
Posted at: 16-01-2014 04:38 AM